एअर अरेबियाले सस्तोमा काठमाडौँको लागि नियमित उडान भर्दै, कति छ टिकट मूल्य ? – Rapti Khabar
असोज २७, यूएई । एअर अरेबियाको आबुधाबी–काठमाण्डौ उडान सस्तोमा हुने भएको छ । एअरलाइन्सले अबुधाबी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँदो शनिबारदेखि सातामा चार उडान गर्ने भएको छ ।
एयरलाइन्सले एकतर्फी उडानको न्यूनतम भाडादर २ सय १६ डलर अर्थात करिव २५ हजार पाँचसय रुपैयाँ तोकेको छ । यो शुल्क अहिले सबैभन्दा सस्तो हो ।
एयरलाइन्सको उडान तालिका एअरबस ए ३२० मार्फत सोमबार, बुधवार, शुक्रबार र शनिबार बिहान ९ बजे काठमाण्डौका लागि उड्नेछ । र सोहि दिन दिउँसो ३ बजे नेपाल अवतरण भई त्यसै दिन ३:४५ मा आबुधाबी फर्कनेछ ।
उक्त उडानममा यात्रा गर्नेहरुले उडान हुनुभन्दा बढीमा ७२ घण्टा भित्रको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ भएको रिपोर्ट लिनुपर्छ । युएईको आबुधाबीबाट एअर अरेबियाले सस्तोमा उडान भर्ने भएपछि नेपालका एयरलाइन्सलाई पनि सस्तोमा टिकट दिन दवाब बढ्ने भएको छ । सस्तोमा उडान भर्ने भएपछि युएई जान चाहने वा युएईमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन सहज हुने भएको छ ।
विदेशबाट फर्किने मध्ये सवैभन्दा धेरै युएईबाट दोेश्रोेमा कतारबाट
सरकारले विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परी फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका हालसम्म एक लाख २ हजार ४ सय ३६ जना नेपालीलाई उद्धार गरेको छ । सिसिएमसिले जारी गरेको आइतबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ५९ देशमध्ये सबैभन्दा बढी २९ हजार ४३२ जना युएइबाट फर्किएका छन् ।
दोस्रो फर्किने मुलुक कतारबाट १५ हजार ८१७ जना स्वदेश फर्किएका छन् । तेस्रोमा साउदी अरेवियाबाट १५ हजार ६४७ र मलेसियाबाट १४ हजार ७१८ जना स्वदेश आएका छन् । यस्तै, कुवेतबाट ९ हजार ५११ जना स्वदेश फर्किएका छन् । यो अवधिमा बहराइनबाट एक हजार ३३९ जना स्वदेश फर्किंदा अस्ट्रेलियाबाट १२ सय ३५ जना स्वदेश फर्किएको उल्लेख छ । ओमानबाट १६ सय ३९ जना र दक्षिण कोरियाबाट १८ सय ११ जना फर्किएकोमा छिमेकी देश बङ्गलादेशबाट ९३० जना फर्किएको सिसिएमसिले बताएको छ । यसैगरी, माल्दिभ्सबाट एक हजार १८ जना फर्किएकोमा छिमेकी देश चीनबाट ४२३ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
कुन प्रदेशमा कति उद्धार ?
स्वदेश उद्धार गरिएका सबैभन्दा वागमती प्रदेशका रहेका छन् । बागमती प्रदेशबाट १८ हजार ७२३ जनाको उद्वार गरिएको छ ।दोस्रोमा प्रदेश नम्बर १ बाट १५ हजार ५३२ जनाको उद्वार गरिएमा तेस्रोमा प्रदेश नम्बर २ बाट १३ हजार १४६ जनाको उद्वार गरिएको छ ।
विदेशबाट स्वदेश फर्केकाहरु विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्नेक्रम जारी छ । होटल क्वारेनटाईनमा १२ हजार १०३ जना बसेका छन् । होम क्वारेनटाइनमा ७ हजार ६७८ जना र लोकल क्वारेनटाइनमा ४ हजार ८६५ जना रहेको सिसिएमसिले जनाएको छ । अस्पतालमा ६७ जना र अन्य ठाउमा ७८० जना रहेको बताइएको छ । यो समाचार गोरखापत्रमा छापिएको छ ।